रहेनन् राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान शाह::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
रहेनन् राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान शाह
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : सोमवार, बैशाख ३१, २०७५
काठमाडौँ- नेपाली फुटबलका चर्चित खेलाडी तथा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल टीमका कप्तान मणि शाहको निधन भएको छ । उनी ५१ वर्षका थिए । शाहको आज ९३१ वैशाख ०७५० अपरान्ह ५ बजेर ४२ मिनेटमा थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ ९एन्फा०का महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले जानकारी गराएका छन् ।
विगत केही वर्षदेखि कलेजोको समस्याले पीडित शाहको उपचार पहिलेदेखि नै नर्भिक अस्पतालमा चलिरहेको थियो । केही दिनअघि समस्या जटिल बनेपछि शाहलाई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । शाहको अवस्था नाजुक बन्दै गएपछि उनलाई आज भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार शुरु गरिएको बुझिएको छ ।
शाहले १७ बर्ष उमेरमा राष्ट्रिय फुटबल टीममा डेब्यु गरेका थिए । दोश्रो दक्षिण एसियाली खेलकुदमा डेब्यु गरेका शाहले बंगलादेशमा सम्पन्न छैठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई फुटबलमा स्वर्ण पदक दिलाउन सफल भएका थिए ।
उक्त साफ गेममा नेपालले फुटबलमा मात्र एउटा स्वर्ण पदक जितेको थियो । जुन स्वर्ण पदक दिलाउन मणि शाहको विशेष योगदान रहेको थियो । उनले फ्रि किकबाट गरेको गोलकैै कारण नेपालले स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको थियो ।
फुटबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकै कारण मणि शाहलाई नेपाली फुटबलमा म्यारोडोनाको रुपमा चिनिन्थ्यो । उनी नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टीमवाट १० नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्ने गर्दथे ।
यी युवाले विश्वभर चम्काए नेपालको नाम !
नेपालले गर्यो कमाल, पारस बने नायक
कांग्रेसका नेताहरूले खेलाडीलाई हौसला दिदै ललितपुरको ठूलोदुर्लुङमा गरे भलिबल प्रतियोगिता
प्रथम उपत्यकाव्यापारी कराते च्याम्पियनशिपको उपाधि मनमैजुलाई